28 / 11 / 2020 28 / 11 / 2020 ခရစ် Wharfe 547 Views စာ0မှတ်ချက် ၁၀၂၇၆ Colosseum, Black ကသောကြာနေ့, Black ကသောကြာနေ့ 2020, Creator Expert, Lego, ရောမရထား
Lego Creator Expert ၁၀၂၇၆ Colosseum မနေ့ကဖွင့်လှစ်ခဲ့သည် LEGO.com.
အကြီးဆုံး Lego လက်ရှိအမှာစာများသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ ၁၉ ရက်အထိတင်ပို့မည်မဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ယူအက်စ်တွင် - US တွင်၎င်းသည်ယာယီစတော့အိတ်ထဲတွင်ရှိသည်ဟုသတ်မှတ်ထားသည်။ မှာထားလို့မရပါဘူး
၃၆ ပိုင်း ၁၀၂၇၆ Colosseum £ 449.99 / $ 549.99 များအတွက်လက်လီအရောင်းရဆုံးမနေ့ကပွဲ ဦး ထွက် အစောပိုင်းကမွေးစားသူများအားဆုချခဲ့သည် ရောမရထား လက်ဆောင် - နှင့်အတူဝယ်ယူပေမယ့်ကြောင့်အခမဲ့လေ့ကျင့်ခန်း၏စတော့ရှယ်ယာရှိပါတယ်ပုံရသည် ထို့အပြင်ယခုထွက်ပြေး.
Lego Creator Expert 10276 Colosseum - မင်းသိထားသင့်တဲ့အချက်ငါးချက်
ကံကောင်းထောက်မစွာ, သင်ကဆက်လက်စောင့်ရှောက်ရန်က Black သောကြာနေ့သဘောတူညီချက်အများကြီးရှိနေတုန်းပဲ။ လည်းပဲ ရွေးချယ်ထားအစုံချွတ် 20%, LEGO.com လက်ရှိတွင်အခမဲ့ကမ်းလှမ်းနေသည် 40410 ချားလ်စ်ဒစ်ကင်းအခွန်ဆက် £ 150 / $ 150 သုံးဖြုန်းနှင့်ဝင်ငွေအခွင့်အလမ်းနှင့်အတူ ၁၀၀,၀၀၀ VIP ရမှတ်များ.
ယနေ့ VIP ဆုရရှိခဲ့သည် is 43179 မစ်ကီမောက် VIP အချက်အလက်များ 20,000 အတွက်သင်ရွေးယူနိူင်သော Minnie Mouse ။ ၎င်းသည် VIP Rewards Vouchers ရှိပေါင် ၁၂၅ နှင့်ညီမျှပြီး ၄ င်း၏ RRP အပေါ်ပေါင် ၄၅ လျှော့စျေးဖြစ်သည်။
← 853967 သစ်သား Minifigure LEGO.com UK - Black သောကြာနေ့ရောင်းဝယ်မှုများတွင် ၂၀% လျှော့စျေး
LEGO ကိုအရင်ကြည့်ပါ Star Wars Tatooine အပေါ် 75299 ပြTroနာ →